Embo MaXhosa: Isilo samaMpondomise
Posted by Embo maXhosa at 7:45 AM
Please help me with the background of 'mirha, umzondi'
Mholweni kuqala. Ndincedeni mgembali yamaKhuma ooMbhathane ndiyacela ndikwabulela.
Anonymous October 25, 2014 at 5:03 AM
Bhotani maXhosa inkcazelo yenu Ngo DOSINI noJOLA ndiyayiva ntonje ndinombuzo intobana nje ngoba ezam izithakazelo zithi DOSINI HELU MHLEHLO MATHANDA GOTYOZELA MFAZI OBELE LIDE ONCELISA PHETSHEYA KOMLANJANA UMSINTSANA.ingabi indibekaphi nah le nkcazelo engendla enize nayo
Anonymous November 14, 2014 at 4:58 AM
u-Dosini uphuma kwindlu enkulu yenkosi uNgxina. Inkosi uNgxaai yile nkosi yamaMpondomise iyayinekomkhulu elalise Mvenyane eMatatiele, eyathi ngenye imini yaphuphupha, isilo esibunturha kwimiqolomba yase Mount Ayliff, yaze yathumela amadoda, aye afumana intombazane yomthwa - uMangxangashe,kuloondawo yayiphutshwe yinkosi.
Lontombazane yomthwa yakhulela apho kwikomkhulu lamaMpondomise, ekwabonakala ngayo sele ikhulelwe ngenye imini, xa ibuzwa ukuba isisu sesikabani, yakhomba inkosi uNgxina.
Kwaye kwanyanzeleka okokuba inkosi ilobole ku-Bathwa ngenkabi ezisibhozo ezimnyama, yaze yamakhela uMangxangashe ezantsi kobuhlanti.
Inkosikazi yokuqala yekumkani, uMangutyana,yayingafumani bantwana bangamakhwenkwe,ekwabonakala nayo sele ikhulelwe yazala uDosini. Le yomthwa yazala uCira, ababantwana baba ngamafumanana-nkundleni.
Eligama lithi Dosini ligama elavela bumini, elona gamalakhe kwakungu Ndosina, kuba kaloku nayo inkosikazi enkulu ide yayifumana inkwenkwe, eyayisithi xa imdlalisa ithi,"Nam ndosina ndixelise abanye abafazi.
Eli lika Cira igama nalo lavela kwisiteketiso sika Mangxangashe - Umthwakazi owayesiti ncinci...rharha xa eteketisa umntwana.
Ubukumkani ke baye bohluthwa ku Dosini, naye wahlanjwa kwikomkhulu, wahamba wayokwakha ngakulonina, kuTsolo, ngenxa yomkhuba awayewenza owabangela ukumka kwezizwe ezininzi emaMpondomiseni ngenxa yokudliwa kweenkomo zazo ngu Dosini.
Ubukumkani ke bawela kwindlu encinci, ku Cira. bahamba kanjalo ngenzala ka Cira.
uCira ke wazala uSabe, yena uSabe wazala uMte, uMte wazala uQengeba kwindlu enkulu, wazala uNgxabane kwindlu encinci.
uQengeba wazala uMajola, uMajola wazala uNgwanya.
Khanyisile Mtakati June 1, 2016 at 4:11 AM
Mna ndisacela ukuva ngobukhosi bakwaMtakati/Malimba phantsi kukaJola ukuba buphi na? Ngoba ndiyeva kuthiwa banobukhosibabo ngaphandle kobu bukaMeji
xolile gope July 18, 2017 at 6:10 AM
Mna ndingu Jola mphankomo qengaba ntole lomthwakhazi kwa Gophe ifani ndiphaye eqagqala phesheya kumnga nenxu
xolile gope July 18, 2017 at 6:13 AM
kuthiwa siqula kumlambo itina indcela ingcaciso
Anonymous November 13, 2017 at 2:04 PM
cela kubuza uba u mhaga no sabe bazalwa ngubani njengoba kuthiwa nga mawele apha kumpondomise?
Unknown May 28, 2019 at 1:48 PM
Bhotani mzi ontsundo ndicela ukubuza ngubani omdala kuno Mpondo no Mpondomise